Xasuuqa Lagu Hayo Soomaalida oo Wali ka Socda Dalka Koonfur Afrika & Muwaadinkii Ugu Horeeyay ee Sanadkan 2018 oo xalay la dilay
Xalay Saqdii dhexe ayaa waxaa Burcad Koonfur Afrikaan ah ay Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka Ganacsada ah ee dalkaasi ku nool ay ku dileen dukaan uu ku lahaa Magaalada Cape Town ee dalka koonfur Afrika.
Alaha u naxariistee Muwaadinkan oo lagu Magacaabi jiray Cabdulaahi Macalin Cali ayaa lagu dhex toogtay Goobtiisa Ganacsi oo ku taalla deegaan ay ku badan yihiin Qowmiyada Madowga ah ee la yiraahdo khayelitsha oo ka tirsan Magaalada Cape town.
Muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee dalka Koonfur Afrika lagu dilo Sanadkaan cusub ee 2018-ka waxaana dabayaaqadii bishii December ee Sanadkii tegay ee 2017 dalkaasi Koonfur Afrika lagu dilay Ganacsade lagu Magacaabi jiray Axmed Colaad Cali.
Dhammaan Kooxaha Burcad ah ee dila Ganacsatada soomalida ee dalka Koonfur Afrika ayaa baxsada mana jirta cid dabagal ku sameysa dilalkani.
Sanadkii tegay ee 2017 ayaa waxaa la shaaciyay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee lagu dilay dalka koonfur Afrika ay gaarayaan ilaa 139 Ruux kuwaas oo sibareer ah loo toogtay goobahooda ganacsi.
January 7, 2018 tuugahaladilo2015